Iintlanzi zenyoka okanye i-mandarin | Ngeentlanzi
Iintlanzi zenyoka okanye isiMandarin
El intlanzi yenamba okanye i-mandarin Ingumzekelo omncinci, awulinganisi ngaphezulu kwe-8 cm, umzimba wayo ulinganisiwe kunye nesilinda. yayo Umbala ubetha kakhulu Iqukethe imivimbo eluhlaza, iorenji, notyheli, ngombala oqaqambileyo oluhlaza okwesibhakabhaka okanye oluhlaza njengombala ongasemva. Ifilimu enamafutha egubungela umzimba wakho iyenza ukuba imelane neemeko zolusu.
Mandarin yazisa Amehlo aqumbe kunye nomlomo omncinci kuqikelelwa phambili ngaphambili. Inamaphiko amabini emqolo kunye namaphiko e-ventral ahlengahlengisiweyo ukuhambisa ukuhamba kwawo kwi-substrate. Inemiqolo emine engqindilili kodwa yona ayinangxangxasi.
Ngombulelo kumbala ongaqhelekanga wentlanzi yentlanzi kunye nokuziphatha kwayo okungafaniyo, ibe yenye yeendlela Ezona ntlobo zixabisekileyo kuninzi lwabantu bathanda i-aquarium, Ngaphandle kokuba iyintlanzi efuna ukhathalelo olukhethekileyo, ngakumbi ukugcina umbala wayo ubalaseleyo.
Ekuqaleni yayihlala kulwandlekazi lwePasifiki kwaye ihlala inxulunyaniswa neengqaqa zekorale, phakathi kwayo ifumana indawo yokuhlala, kubunzulu obuphakathi kwe-1 kunye ne-18 yeemitha, apho amaqondo obushushu aphakathi kwama-24 nama-26ºC. Ngenxa yoko, kufuneka kuthathelwe ingqalelo ekhethekileyo kwi-aquariums. Ukuba sinokufumana iintlanzi ukuba ziziqhelanise, ubude bayo bokuphila ekuthinjweni yiminyaka emi-6.
Iintlanzi zedrako kufuneka zinikwe inkathalo yesiqhelo kwiindawo ezinamanzi olwandle nasemanzini kufuneka zihlawulwe lobushushu kunye nitrogenous iikhompawundi. Abanyamezeli amaqondo obushushu angaphezulu kwe-27 degrees kakuhle okanye i-nitrate ephezulu.
Umceli mngeni ophambili ekuthinjweni kwe-dragonfish kukuziqhelanisa nolunye uhlobo, olusisiseko sokutya, kukutya okufileyo. Ungafikelela kule njongo usebenzisa i-brine shrimp, kwaye uhambe kancinci uyixube kunye nofileyo. Kufuneka kuqatshelwe sukuxuba iintlanzi ze-mandarin nezinye iintlanzi ezikhuphisanayo ezifikelela kukutya ngesantya esiphezulu. Kufuneka siqiniseke ukuba ukutya kufikelela kuwe naphi na.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ngeentlanzi » Intlanzi » Iintlanzi zenyoka okanye isiMandarin
Ewe ipinki, awunalo uluvo lokuloba ngeentlanzi zolwandle kwaye ibonisa iiligi ongakhange ubenazo okanye ubabulele
Zivela phi iintlanzi ezikweleenjiko?
Iintlanzi zezithixo zamaMoor